Home / Interior design / 155㎡Ny habaka boribory, Taranaka telo miara-miaina tsy misy banga amin'ny taranaka. Rikyu Design
2021 / 08 / 13 FisokajianaInterior design 3018 0
Ao amin'ny fianakaviana iray manana taranaka telo, misy elanelana misy eo amin'ny taranaka? Ny habaka manokana misy eo amin'ny tsirairay sy ny fianakaviana dia saika elanelana ratsy, tsy toerana manokana manokana?
Tsy ny fieritreretana ny fampiasana maso sy ny fampiasana fotsiny, fa ny fomba hahitana ny fifandanjana eo amin'ny olona sy ny fianakaviana ihany koa no antony tsy maintsy dinihintsika rehefa mamorona fianakaviana lehibe.
Azo atao ve ny sady tsara tarehy no azo ampiharina?
Rehefa misy ankohonana, misy ve “isika” fa tsy misy “izaho”?
Ny fandeferana sy ny fisintahana eo amin'ny tanora sy ny anti-panahy. Ao amin'ity trano ity, ny lamina, ny tsipika ary ny fomban'ny fitaovana dia mihavana tanteraka.
Manatrika ny Henglin Bay mahafinaritra, ity trano ity dia eo am-pitan'ny farihy sy ny ranomasina, izay toerana iray ihany koa izay fivezivezan'ny vorona mpifindra monina isan-taona.
Rehefa tonga tamin'ny dinika famolavolana izay ilain'ny fianakaviana Ramatoa Zhang dia naneho ny faniriany hampifanaraka ny filan'ny loholona hatsarana sy azo ampiharina izy ary mitazona ihany koa ireo singa hita maso manankarena sy matanjaka izay tiany, ary natolotra tamim-pahasahiana ny fampiasana vy tsy misy fangarony ho fitaovana ho an'ny ny kabinetra rehetra ao an-trano.
Havia mihaona amin'ny fianakaviana
Miaraha mandroso miaraka amin'ny fianakavianao
Ny efitrano fidirana dia faritra iray lehibe hidiran'ny fianakaviana sy hivoahany, ary eo afovoan'ny trano iray manontolo ihany koa izy io, noho izany dia manana sakana madio sy tsipika fivezivezena milamina amin'ny fahitana sy ny fampiasana azy.
Eo amin'ny lafiny fitehirizana dia ampiasaina ny planina fitehirizana akanjo, kiraro ary zavatra maro samihafa, ny orient orientations sy ny halalin'ny kabine. Ny kabinetran'ny kiraro eo anilan'ny varavarana dia manana halaliny tery ary mampiasa karazana fitarihana hametrahana kiraro mahazatra, fa ny kabinetra eo akaikin'ny seza manova kiraro kosa dia ampiasaina ho toerana anaovan'ny kiraro efa tonta sy tsy dia matetika.
Ny ampahany maintin'ny kabinetra amin'ny ilany havia dia talantalana mankany amin'ny làlan'ny seza miova kiraro, ahafahanao mametraka zavatra kely hivoahana. Ny haavon'ny faritra mainty amin'ny kabinetra ambony sy ambany dia mety tsara amin'ny kiraron'ilay vehivavy sy kiraro habe hafa tsy mahazatra.
Aorian'ny fidirana amin'ny varavarana, ny kabinetra amin'ny ilany ankavanana eo anoloana dia kasaina ho faritra ho an'ny akanjo sy kitapo faharoa an'ny fianakaviana. Toy ny fihaonan'ireo tsipika velona sy mivezivezy ao an-trano dia azo atao ny mifindra trano na mivoaka indray mandeha.
Ny kabinetra tery eo am-baravarana dia natao miaraka am-baravarana roa sosona, ka ilay kabinetra iray ihany dia afaka mifanena amin'ny fidirana sy ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny gorodona dia misaraka amin'ny sehatry ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny taila fotsy sy ny gorodona hazo, ary ny tsipika miolikolika dia mampiako ny zoro mihoritra etsy ambony.
Manoloana ny fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny andohalambo miolakolaka kanto vita amin'ny vy tsy manara-penitra dia manalemy ny tara-pahazavana ary mitondra fombafomba amin'ny tranon'ny fianakaviana. Ny curvature malefaka tratran'ny metaly metaly dia kanto sy feno teboka.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia manome hazavana tena tsara sy fahitana ny trano, ary ny faritra iraisana-fisakafoanana ao an-dakozia dia mahatonga ny hetsika fanangonana manankarena.
Ny rindrina aoriana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia miendrika talantalana fampisehoana, izay azo ampiasaina ho faritra aseho rehefa tsy mijery tele.
Ny tsipika mainty maimaimpoana amin'ny rindrina dia feno eritreritra, izay mety hidika hoe "Fitiavana" na "miaina".
Ny antsipiriany kely manan-karena ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny arc kely ao amin'ny antsipiriany dia mamerina ny arc lehibe amin'ny rafitra
Ny rindrina eo anelanelan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny lavarangana dia mamela ny faritra ho an'ny besinimaro mamorona tsipika fonosana voajanahary. Ny sezatra azo ovaina miaraka amina fanitsiana lafiny maro dia mamela ny mpianakavy hifampiresaka mifanatrika na aiza na aiza misy azy ireo.
Ny firafitry ny kabinetra fahitalavitra sy ny kabinetran'ny tetikasa. Ny kabinetran'ny tetik'asa dia tafiditra tsara ao anaty vatana maitso sy maintin'ny kabinetra fahitalavitra, izay mbola azo ampiasaina ho toy ny vatasarihana mahazatra ny kabinetra maintso.
Fianakaviana tia mijery sarimihetsika fa tsy te-ho ny fahitalavitra no mpilalao fototra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Taorian'ny herinandro nieritreretana an'io niaraka tamin'ny mpamorona dia nahazo ny tsara indrindra tamin'ny roa tonta ny tompon-trano.
Ny projecteur tamin'ny laser dia napetraka tao anaty kabinetra sliding misy vera optique etsy ambony. Ny projector dia matetika tafiditra ao anaty kabinetran'ny fahitalavitra, saingy azo afindra malalaka rehefa ampiasaina. Ny vera optique natsofoka teo ambonin'ny kabinetra dia mamindra fahazavana 99.9%, manome traikefa fijerena tonga lafatra.
Rehefa avy niditra ny lavarangana dia mizara ho lasa lavarangana fandalinana sy lavarangana fizahana ny habaka 5m lava. Izy io dia vita amin'ny fiolahana valindrihana vy mifono vy, mampifandray ny rindrina sy ny tafo mba hamolavolana fahatsapana fonosana mafy, ary koa manalefaka ny fisian'ny rindrina.
Mifanohitra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny faritra midadasika amin'ny fandokoana indigo sy ny vorombola, izay miteraka fahatsapana fiatraikany tsy ampoizina ho an'ireo miditra amin'ny lavarangana.
Ny faritra ianarana dia natsangana miaraka amin'ny fizarazarana ho mpizara, manampy ny fiainana manokana sy ny fahatsapana ny fefy, ary mitazona fifanakalozan-kevitra amin'ny faritra iraisana iray manontolo.
Ny faritry ny efitrano malalaky ny zavamaniry eto ambanin'ny masoandro amin'ny faran'ny iray hafa dia mamela ny fianakaviana hiala sasatra vetivety mandritra ny fianarana sy ny fiasana.
Ny latabatra fisakafoanana sy ny seza dia vita amin'ny walnut sy metaly, izay mifanaraka amin'ny toetran'ny trano.
Ny fandinihana dia mampifandray ny sofa amin'ny faritra fisakafoana sy lakozia. Ny latabatra fisakafoana lava dia voafidy ho efitrano fisakafoan'ny fianakaviana ao amin'ny efitrano malalaky malalaka, ahafahan'ny fianakaviana mifampiresaka mifanatrika.
Ny fampiasana takelaka onja eo amin'ny faran'ny nosy dia manampy ny maoderina ho an'ny trano iray manontolo.
Nisy fatana vilany sy vilany tanimanga nampidirina tao amin'ilay nosy. Rehefa misakafo kely ny lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny herinandro dia afaka mihinana mivantana izy ireo aorian'ny fanafanana na fandrahoana setroka amin'ny fatana tanimanga misy herinaratra izay manatsara be ny fahafaham-po sy ny fiononana amin'ny fisakafoanana.
Mampiasa varavarana misosa mangarahara ny lakozia hisorohana ny diloilo sy ny setroka raha mampitombo ny tsipika fidiran'ny fahitana. Ny faritra fitahirizana kojakoja kely eo an-kavanan'ny lakozia dia mora ihany koa amin'ny fametrahana lovia sy fitahirizana entana ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny lafiny iray.
Ny vilany sy ny fatana dia apetraka amin'ny lafiny roa amin'ny latabatra miendrika L, ka mora ny manasa sy manapaka ary manendasa ary manome antoka ihany koa ny fisarahana mando sy maina.
Efitra fitehirizana tany am-boalohany ny zoron'ny lakozia. Rehefa avy nanokatra azy io arakaraka ny fanaon'ny fianakaviana mahandro sakafo, dia faritra fanaovan-trondro ho an'ny rain'ilay nampiantrano azy izao, izay ahafahany mahandro ny sakafon'ny ankohonany ankafiziny!
–Ny faritra an-dakozia izao dia faritra zarain-trondro ho an'ny rain'ilay tompon-trano.
Amin'ny ankavanana sy irery
Afaka amin'ny manirery
Ny efitranon'ireo ankizy misy jiro amin'ny lafiny roa dia manana fomba fijery mivelatra ary ny lokon'ny hazo dia tsy zaza velively. Izany dia mamela toerana be dia be ho an'ny fanovana amin'ny ho avy sy ny fiasa isan-karazany.
Kit kitapo mahasarika maso indrindra eo am-baravarana, miaraka amin'ny jiro rindrin'ny skateboard eo amin'ny rindrina, miaraka amin'ilay tovolahy mozika feno angovo mahafinaritra.
Rehefa milalao amponga miaraka amina talenta amponga sy alim-pandihizana ny ankizy dia afaka manao fanazaran-tena malalaka ao an-trano ny ankizy nefa tsy manelingelina ny mpiara-monina aminy.
Ny fitehirizana kilalao manankarena sy milamina, dia zazalahy kely falifaly!
Ny ilan'ny farafara dia mampiasa latabatra am-pandriana sy kabinetra fitehirizana mba hanamorana ny fitahirizana karazana masoandro sy kilalao isan-karazany. Trano miloko miaraka amin'ny zaza mba hampitomboana ny fahafinaretana amin'ny fanangonana tena, ampio kitapo tsaramaso voaova ho tontolo kely misy ankizy.
Ny latabatra dia apetraka eo amin'ny zoro voafintina miaraka amina fahatsapana fefy, ary ny fitehirizana ny rindrina dia ampiasaina hametrahana fitaovam-pianarana isan-karazany. Ny takelaka lavaka dia mahatonga ny zavatra hita maso indray mipi-maso, ka ho mora amin'ny ankizy ny manangona entana.
Ireo jiro mirehitra marevaka amin'ny lafiny roa dia mamorona atmosfera malefaka amin'ny torimaso. Ny lambam-baravarana satin volontany miaraka amin'ny kapoka borosy maotina dia milamina sy maharitra
Ny efitrano fandraisam-bahiny mavo misy ocher misy loko vita amin'ny menaka dia mizara ho faritra telo: efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fidiovana ary efitrano fatoriana.
Rehefa avy namaky ny trano fidiovana ianao mba hisasana sy makiazy tsotra ary ny efitrano fizahana tsy miankina dia miditra amin'ny faritra fatoriana ianao miaraka amin'ny fomba hosodoko solika matanjaka, ary ny tsipika fihetsiketsehana feno tena dia manome fomba fanao amin'ny fomba fanao amin'ny tompony.
Ny tontonana vita amin'ny beton-precast-transmitter dia ampiasaina eo ambonin'ny locker mba hahatratrarana lanitra feno kintana, mampiditra hazavana avy amin'ny lavarangana velona nefa tsy masiaka loatra.
Ny efi-tranom-baravarankely dia natao miaraka amina lalimoam-baravarana telo, ary ny faritra dia mizara arakaraka ny fahazarana maka lahy sy vavy.
Ny efi-trano dia eo am-baravarana fidirana mba hihaonana amin'ny tsipika miovaova an'ny vehivavy mpikarakara trano alohan'ny hodiany sy hivoaka ny varavarana, ary miaraka amin'izay koa, napetraka ny kabinetra fitehirizan-javatra kely mirefy 1.1 m mba hifanaraka amin'ny halavan'ny mpampiantrano. , izay afaka mametraka kojakoja samihafa sy vokatra hatsarana amin'ny tahiry. Aorian'ny makiazy ao amin'ny trano fidiovana dia azonao atao ny mamita ny hetsika farany eto.
Ny akora fampiasa amin'ny gorodona ankapobeny dia misy ny anti-slip sy ny anti-bakteria. Ny seza eo ambanin'ny rosette dia mamela anao hipetraka sy handro, ary tena sariaka amin'ny anti-panahy koa.
Ny efitrano fandroana ampahibemaso, izay ampiasain'ny fianakaviana indrindra, dia natsangana ho karazana fisarahana telo, ary fanahy ratsy apetraka eo akaikin'ny efitrano fidirana mba hanasana tànana ny fianakaviana rehefa mody izy ireo.
Ny efitra fandroana dia manafina ny fandroana Japoney feno izay mampifangaro ny fandroana, ny fandroana, ny fitazonana akanjo mafana sy maina. Ny fananganana modular iray manontolo dia azo vitaina ao anatin'ny 3 andro, saingy zava-dehibe ny manamarika fa ny toerana sy ny refy dia tokony hotehirizina amin'ny sehatry ny fananganana rindrina.
Raha ny filazan'ny vehivavy tompon-trano dia trano fandroana ity izay tsapany fa tsy maintsy hananany rehefa avy nanandrana izany tao amin'ny tranon'ny namany tany Shanghai izy.
Joro mivadika endrika
01 Mamelatra ny volo mitsivalana amin'ny alàlan'ny fampiasana valizy
Noho ny faritra voadona noforonina noho ny fanitarana ny latabatra an-dakozia dia tonga lafatra ny fampiasana ny kabinetra fitahirizana mangarahara hanalabarana ny tampon'ny rindrina ho toy ny faritra aseho ho an'ny kaopy sy fitaovana mahazatra.
02 Ampiasao ny kabinetra hamenoana ny toerana ao ambadiky ny varavarana
Ny toerana ao ambadiky ny varavaran'ny efitranon'ireo ankizy dia noforonina taorian'ny nifindrana ho any ankavanana ny varavarana, ary fitoeram-boky fitaratra no ampiasaina mba hampitomboana ny habetsahan'ny fitehirizana nefa tsy handany toerana.
03 Ampifandanjana ireo efitrano misokatra amin'ny efitrano fitahirizana
Ao amin'ny faritra lalantsara misokatra amin'ny efitrano fidirana, misy ny efitrano fitehirizana «baomba king» ao an-trano. Ny efitrano fitsangatsanganana misy 1.3㎡ fotsiny dia lasa faran'ny entana lehibe rehetra ao an-trano.
▲ Ny kisary firafitra voalohany
Ny trano dia manana jiro sy rivotra tsara, tsipika fiasa mazava, ary toerana mahafinaritra amin'ny tontolo manodidina.
Ny lesoka ao an-trano dia ny faritra iraisana izay lehibe nefa ny efi-trano kely, ny toerana malemy dia sarotra ampiasaina, ary be ny fandroana sy ny lavarangana.
▲ Ny drafitry ny gorodona aorian'ny fanavaozana
Ny faritry ny daholobe havia sy ny faritra tsy miankina ankavanana dia voafaritra mazava.
Ahenao ny isan'ireo trano fandroana sy efitrano
Ny voalohany dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana any amin'ny faritra tsy miankina, mampifangaro ireo zoro tsy misy kilema ary mampitombo ny fitehirizana sy ny fahafinaretana.
Ny trano iray manontolo dia mizara tsara ho faritra havia sy havanana aorian'ny fanavaozana. Ny faritra ho an'ny daholobe dia ampiasaina ho toy ny seho hetsika ho an'ny famoriam-pianakaviana / fivorian'ny namana. Ny faritra manokana dia misy tontolo kely ho an'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Ny fihaonan'ny efitrano fidirana sy ny trano fidiovana ho an'ny daholobe dia mampifandray ireo faritra mihetsiketsika sy mavitrika, mba ho malama sy hadio ny tsanganana.
Toerana misy ny tetikasa / Tanàna Lotus
Ekipa mpamorona / Shu-Min Zhong, Jie Shi
Faritra famolavolana / 155 ㎡
Vola haingon-trano / 90 w (tsy tafiditra ao an-trano fitaovana)
Previous :: Fananganana, Toerana malalaka an'ny fahalalahana sy ny herisetra Next: Akrilika miloko maivana, mandika ny hatsaran'ny zavakanto amin'ny tontolon-karena ankehitriny | Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 2999